Daabacaadda Dijitaalka ah waxay la Kulantaa Ecommerce oo ay la socoto Zmags Verge
Wednesday, September 5, 2012 Khamiista, Sebtember 6, 2012 Douglas Karr
Our Ecommerce kafaalaqaade, Zmags, ayaa soo saaray daawade daabacaad dijitaal ah oo cusub. Verge ™ waxay u oggolaaneysaa shirkadaha inay u beddelaan PDF-yada (iyo waxyaabaha kale) daawadayaal halkaas oo ay ku dul dhaafi karaan xogta, sawirrada, fiidiyowga, iyo xitaa barxadooda e-commerce. Daawade waxaa lagu geyn karaa desktop-ka, moobaylka iyo kaniiniga iyadoo loo marayo maareyn fudud oo maareyn ah.
Tani waa wax horumar ah xagga daabacaadda dhijitaalka ah, taas oo u oggolaanaysa shirkadaha inay dhisaan khibrado is-dhexgal iyo soo jiidasho leh oo ay si toos ah wax ugu iibin karaan. Waagii hore, shirkaddu way qaybin kartaa joornaalkeeda ama buug-yaraheeda laakiin waxay ahayd inay ku tiirsanaato akhristaha ku soo noqoshada dukaanka internetka si uu u iibsado. Qalabkan cusubi wuxuu u oggolaanayaa shirkadda inay ku darto meelaha kulul ee loogu talagalay macluumaadka iibsiga iyo xitaa waxay u oggolaaneysaa iyaga inay isku xirxiraan dhowr badeecadood.
Laga soo bilaabo Zmags Verge bogga wax soo saarka
Bogagga ka kooban maadooyinka iyo sawirrada firfircoon ayaa si caqli-gal ah loo sahamin karaa, loo wadaagi karaa oo si dhakhso leh loo taaban karaa ama guji ayaa loo dhaqaajin karaa a gaadhigiina shopping, dhammaantood iyadoon loo baahnayn dib-u-cusbooneysiin ama cusbooneysiin bog ah.
Waxay hagaajineysaa khibrada isticmaale dhammaan goobaha oo dhan si aad uga faa'iideysato iPad HTML5 shaqeynteeda, iyo sidoo kale taleefannada casriga ah, kumbiyuutarada ama laptops; xitaa waxaa lagu dhejin karaa midig boggaaga sumadda ee Facebook.
Zmags gaar ah Ku duub bogga shaqeyntu waxay kordhisaa dakhliga iyadoo u oggolaaneysa dadka wax iibsanaya inay eegaan dhammaan waxyaabaha ku jira midkood kooxaynta alaabta, iyo caleenta iyo iibsashada walxaha shaqsi ahaan ama wadar ahaanba.
Oo waa tan buug-yaraha alaabta Verge - ee daawadayaasha. Hubso inaad gujiso badhanka bidix ee kore si aad u aragto shaashad buuxda!
Tags: daabacaadda dhijitaalka ahecommercedukaanka internetkapdfmaamulka pdf